Deforming-osteoarthritis (esifushanisiwe njengoba noMnyango wezoLimo) ka kwamadolo - isifo esiwohlozayo-dystrophic. Cishe njalo wethu kwamajoyinti bacindezeleke, ngoba ubambe wonke isisindo, futhi ngaleyo ndlela futhi unikeze ukuhamba ngezinyawo. uqwanga Hyaline ukuthi unesibopho cushioning amalunga omzimba, ngokuhamba kwesikhathi, kuba izacile, futhi lapho ekugcineni usule, ithambo echayeke futhi uqala zikhule, ukwakha spikes (exostosis). Ngenxa yalezi zinguquko e kwedolo is likhubazeke. Ngokuvamile, isifo kubhekwa iminyaka, ababuzwayo abantu abaningi ngemva kweminyaka engu-amane, cishe kabili njengoba ngokuvamile kwenzeka kubantu besifazane kunabesilisa.
NoMnyango wezoLimo amadolo: izimbangela
Lesi sifo kungaba samabanga aphansi noma. Esimweni sokuqala akunakwenzeka ukusho ngokuthe ngqó ukuthi yini imbangela inqubo sokugembula. Ochwepheshe basikisela ukuthi noMnyango we amadolo - umphumela ukucindezeleka okungadingekile kubo noma, Ngakolunye uhlangothi, ongaphakeme motor umsebenzi, izinguquko ezihlobene nokukhula, ukhuluphele. Izimbangela ifomu yesibili isifo okuthiwa odokotela ukulimala ngokuhlanganyela, ezifana nemisipha ziklebhukile futhi meniscus, futhi izifo ezithile (isifo sikashukela, sifo, i-rheumatoid arthritis kanye nabanye.).
amadolo wezoLimo: esiteji futhi izimpawu
Ngokuvamile, isifo livezwa ubuhlungu emadolweni nokuqina emalungeni. Nokho, ukushuba izimpawu incike ngobucayi osteoarthritis deforming.
Lapho kwedolo ngokuhlanganyela noMnyango wezoLimo 1 degree of isithombe emtholampilo sivezwe wavuma kakhulu. Esikhathini knee kukhona umuzwa yobunzima. Ngemva kokulala noma kokuhlala isikhathi eside esimweni static, umuntu angase ubunzima ekuhambeni, kodwa kokudamba emva ukunyakaza iDemo. Kulesi sigaba, asikafiki deforming izinguquko uhlala evamile ukuhamba ngokuhlanganyela.
Lapho deforming osteoarthritis ludlulele besigaba sesibili, izimpawu kakhulu sithuthukiswe, okuholela ukubukeka isikhathi eside eqinile ubuhlungu kwedolo. I siqala ilunga deform, futhi ngokushesha kakhulu kuba lubonakale. Flexion nokwandiswa amadolo kuba nzima, kube siyakhukhumala, uma uhamba ngezinyawo kwezwakala ukungqubuzana kwezingqimba ezinkulu. Ngisho ne izimpawu ezinamandla, iningi labantu akuzona ezisheshayo abone udokotela. Futhi ngeze! Ngemva ekwelapheni lesi sifo kulesi sigaba kungase kuphumelele kakhulu.
amadolo wezoLimo degree yesithathu - isivele egijima isifo libhekene aphikelele ubuhlungu, okuyinto zigcinwa ezinyakazayo futhi uphumule. Progressive ukusonteka ngokuhlanganyela ebonakalayo ngokubona okubonakala ngeso lenyama, ngaphezu, kukhona izinyonga. ukuhamba ngokuhlanganyela kukhawulwe ukuze kwenzeke ukuba ugobise kwedolo.
Ukwelashwa nokuvikelwa amadolo wezoLimo ngokuhlanganyela
Lesi sifo iphathwa ngu izindlela olandelanayo noma kuhlinzwa (kuncike ngezinga lesi sifo futhi izinkomba ngabanye nesineke). Udokotela ukuba khona kuyinto traumatologist. Okokuqala awabela ukuthola imithi ethile eqeda ukuvuvukala yakhelwe okudambisa ubuhlungu futhi ukunciphisa ukuvuvukala emalungeni. Esigabeni acute ingasatshenziswa naphakathi-articular corticosteroids. Encwadini Inkambo yokwelashwa esetshenziswa hondroprotektory. Kodwa munye kuphela imithi nalesi sifo ngeke ukwazi ukubhekana nesimo. Ukubuyisela ukuhamba ngokuhlanganyela, kubalulekile ukuba uhlanganyele elashwe ngokomzimba esibanzi. Uma wezoLimo amadolo ungaphakathi Usuqhubekile, kungashiwo Kunconywa Ukushintshwa kwamajoyinti omzimba, okungukuthi, esikhundleni salo kube nokuthile i nolwelwesi yokufakelwa.
Ukususwa Imvukuzane Oncology Sikhungo Sekukhangisa ekhatsi Moscow. Izindlela zokususa amavukuzi, nemiphumela Izibuyekezo
Nest Baby izandla. Indlela thunga isidleke usana
Indlela ukungena okhiye ku "isisusa", futhi kungani kudingeka
Ukucinga Satellite Systems: ukubuyekezwa, izincazelo, Ukucaciswa nokubuyekeza. Isethelayithi uhlelo ukuphepha imoto